Maxaad Farmaajo u mucaaraday oo Xaawo looga saarey Guddiga doorashadda | KEYDMEDIA ONLINE
Maxaad Farmaajo u mucaaraday oo Xaawo looga saarey Guddiga doorashadda
Waa arin muujinaysa in Rooble uusan madax-banaanayn, oo wali looga soo meeriyo waxa uu qabanayo Xafiisyada Fahad iyo Farmaajo.
MUQDISHO, Soomaaliya - Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, gudoomiyaha Xisbiga Mucaaradka Wadajir ayaa sheegay in Guddiga doorashada laga saaray Xaawo Aadan Yare Culusow oo lagu eedeyey in ay Farmaajo ka soo horjeedday.
Wuxuu xusay in Gabadhan ay ka tirsanayd taageerayaasha Mucaaradka, sidaas darteedna loogu bartilmaameedaday, isagoo arintan ku tilmaamay inay mugdi gelinaysaa hufnaanta Guddiga iyo dhexdhexaadnimada Ra'iisul Wasaare Rooble.
Musharaxa ayaa tilmaamay in ku dhowaad 20 ruux oo taageerayaasha Farmaajo ah iyo toboneeyo dharcad ah oo katirsan NISA ayaa weli kamid ah Guddiga Xaawo laga saarey, iyadoo uu CC Warsame ka digay in liiska lasoo saaro iyadoo aan la turxaan-bixin.
Waxaa sii xoogeysanaya kalsooni la'aanta Mucaaradka ee howsha doorashadda uu wado RW Rooble, kadib markii ay ogaadeen in aysan jirin madax-banaani siyaasadeed oo uu Ra'iisul wasaaraha haysto.